Hiparitaka amin’ny faritra maro: mpampianatra 90 voaray hiasa amin’ny sekoly teknika 17 | NewsMada
Hiparitaka amin’ny faritra maro: mpampianatra 90 voaray hiasa amin’ny sekoly teknika 17
90 ny mpampianatra voaray tamin’ny fifaninanana sy efa niatrika fanofanana tafiditra ho mpiasam-panjakana ka nahazo ny taratasy fifanarahana asa avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny fanofanana momba ny asa, omaly. Hiasa amin’ny sekoly teknika 17 manerana ny Nosy izy ireo hampihenana ny tahan’ny tanora tsy anasa, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Fampianarana teknika, Rahantasoa Lydia Aimée, teny Ampefiloha nandritra ny fizarana ny taratasy fifanarahana asa.
Ny antsasa-manilan’izy ireo, avy ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika ihany fa ny ambiny kosa, avy any ivelany satria tokony hisokatra amin’ny sehatra hafa ny fifaninanana. Nanohana tamin’ny fandraisana ny mpampianatra vaovao ny Agence française pour le développement (AFD) sy ny Unesco ary ny mpiray ombon’antoka vahiny hafa. Hanatsara ny fitaovam-panofanana sy ny fotodrafitrasa ny mpanohana vahiny fa anjaran’ny minisitera ny manome olona hampianatra sy hanofana ny tanora. Amin’ny sehatry ny asa vaventy sy ny taotrano ny 50 amin’ireo vao noraisina, 20 mpanofana « spécialisés » ary ny 20 ambiny, mpanolotsaina amin’ny torolalana sady ho mpanara-maso ihany koa.
Eto Analamanga, any Atsinanana, any Boeny, any Alaotra Mangoro… ny toeram-piasan’ny mpampianatra. Hanomboka tsy ho ela ihany koa ny fandraisana ny “vacataire” miasa eny amin’ny sekoly fa misy ny rafitra arahina.